Ciidamada dawladda federalka oo ku hareeraysan suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyo dagaal halkaasi ka socda. – Radio Daljir
Muqdisho, May, 22 – Dawladda federalka ayaa sheegtay inay gashay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo ay gacanta ku hayaan ururka Al-shabaab, waxaana maanta (Axad) suuqaasi laga maqlayaa raas culus oo ay is wardaarsanayaan labada dhinac ee Shabaabka iyo Dawladda.
Sarkaal ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka dawladda ee dagaalka ku jira oo la yiraahdo dhamme C,qaadir Faarax ayaa waraysi uu siiyey idaacadda Daljir ku sheegay in ku hareeraysan yihiin suuqaasi, ayna qaybo suuqa ka mid ah qabsadeen.
Dagaalka maanta ayaa geystay khaasare nafeed oo gaaray dhinacyada dagaalamaya iyo dadka shacabka ah inkastoo aan si dhab loo ogayn tirade rasmiga ah. Goobjoogayaal ayaa daljir goor dhawayd u sheegay inay maqlayaan diryanka madaacfiicda la is dhaafsanayo.
Suuqa Bakaaraha oo ah kan ugu wayn Somaliya ayaa muhiim u ah dhinacyada ku dagaalamaya, waxaana ganacsatada suuqaasi ay had iyo jeer ku celceliyaan inay iyagu maamulaan suuqa uuna gardarro tahay duullaanka dawladdu.